“မိုးစတင်ရွာလာတာနဲ့ နောက်ဖြစ်လာမယ့် ရောဂါကပ်ဘေးအခြေအနေကို ပြောပြလာတဲ့ ကျော်ကျော်” - Cele Connections
ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ကျော်ကျော်ကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ အမြဲ တမ်းပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်တတ်တဲ့ ကျော်ကျော်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်၊ ဆုမြတ်နိုးဦးတို့နဲ့အတူ ဟာသလေးတွေ လုပ်ကာ ပရိသတ်တွေအတွက် အပျော်ကူးစက်အောင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လေ့ရှိသူပါ.။ အလှူအတန်းတွေကိုလည်း လုပ်ကိုင်လေ့ရှိတဲ့ ကျော်ကျော်ကတော့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုသာ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်လေ့ရှိပါတယ်.။
ဒီနေ့ ဧပြီလ (၂၇)ရက်နေ့မှာတော့ ကျော်ကျော်က မိုးစရွာလာတဲ့ အချိန်မှာ သူတွေးမိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို “ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေမယ့် အရာလေးတွေကိုပဲ တွေးမိနေတယ်ခင်ဗျာ…။ ကိုဗစ်ရောဂါဆိုးကြီး ပျောက်ဖို့ဆိုတာကလည်း ကြာဦးမယ်…။ stay home ကာလကလည်း ဒီပုံဆို ထပ်နေရဦးမယ်….။ ဒါပေမယ့် မုန်တိုင်းကလည်း ဝင်လာနေပြီ…။ မုန်တိုင်းဝင်လာပြီဆိုပေမယ့်လည်း မီးတွေလည်း ပျက်ဦးမယ်။ ရေကလည်း ကြီးဦးမယ်.။ .အဲ့ခါကြရင် တောင်တွေကပြို ၊ လမ်းတွေကပျက် ထမင်းတွေလည်း ငတ်ကြဦးမယ်..။ .
ဒါပေမယ့် ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေ တစ်နေရာတည်းမှာ စုနေကြတဲ့အခါ ကျတော့မှ ငဗစ်အကြိုက်တွေ့ပြီပဲ…။ ဒါတောင် ဆက်မတွေးလို့ ဆက်တွေးရင် ဒီထက်ပိုပြီး စိတ်အားတက်ကြွစေမယ့် အရာတွေ အများကြီးကျန်သေးတယ် .။” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။ ကျော်ကျော်ကတော့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ သူ့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်လေးတွေကို ရေးသားတင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ကျော်ကျော်နဲ့ အတွေးတူတဲ့ သူများရှိရင်လည်း မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးခဲ့ပါဦးနော်.။
“မိုးစတငျရှာလာတာနဲ့ နောကျဖွဈလာမယျ့ ရောဂါကပျဘေးအခွအေနကေို ပွောပွလာတဲ့ ကြျောကြျော”
ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ ကြျောကြျောကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော.။ အမွဲ တမျးပြျောရှငျစှာ နထေိုငျတတျတဲ့ ကြျောကြျောကတော့ သူငယျခငျြးတှဖွေဈကွတဲ့ ညီထှဋျခေါငျ၊ ဆုမွတျနိုးဦးတို့နဲ့အတူ ဟာသလေးတှေ လုပျကာ ပရိသတျတှအေတှကျ အပြျောကူးစကျအောငျ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလရှေိ့သူပါ.။ အလှူအတနျးတှကေိုလညျး လုပျကိုငျလရှေိ့တဲ့ ကြျောကြျောကတော့ ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေိုသာ သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလရှေိ့ပါတယျ.။
ဒီနေ့ ဧပွီလ (၂၇)ရကျနမှေ့ာတော့ ကြျောကြျောက မိုးစရှာလာတဲ့ အခြိနျမှာ သူတှေးမိတဲ့ အကွောငျးအရာလေးတှကေို “ကြှနျတျော ဒီနတေ့ော့ စိတျဓာတျတကျကွှစမေယျ့ အရာလေးတှကေိုပဲ တှေးမိနတေယျခငျဗြာ…။ ကိုဗဈရောဂါဆိုးကွီး ပြောကျဖို့ဆိုတာကလညျး ကွာဦးမယျ…။ stay home ကာလကလညျး ဒီပုံဆို ထပျနရေဦးမယျ….။ ဒါပမေယျ့ မုနျတိုငျးကလညျး ဝငျလာနပွေီ…။ မုနျတိုငျးဝငျလာပွီဆိုပမေယျ့လညျး မီးတှလေညျး ပကျြဦးမယျ။ ရကေလညျး ကွီးဦးမယျ.။ .အဲ့ခါကွရငျ တောငျတှကေပွို ၊ လမျးတှကေပကျြ ထမငျးတှလေညျး ငတျကွဦးမယျ..။ .
ဒါပမေယျ့ ရဘေေးသငျ့ပွညျသူတှေ တဈနရောတညျးမှာ စုနကွေတဲ့အခါ ကတြော့မှ ငဗဈအကွိုကျတှပွေီ့ပဲ…။ ဒါတောငျ ဆကျမတှေးလို့ ဆကျတှေးရငျ ဒီထကျပိုပွီး စိတျအားတကျကွှစမေယျ့ အရာတှေ အမြားကွီးကနျြသေးတယျ .။” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။ ကြျောကြျောကတော့ ဖွဈနိုငျတဲ့ သူ့ရဲ့ ထငျမွငျခကျြလေးတှကေို ရေးသားတငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော.။ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ကြျောကြျောနဲ့ အတှေးတူတဲ့ သူမြားရှိရငျလညျး မှတျခကျြလေးတှေ ရေးခဲ့ပါဦးနျော.။
“လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ ခံစားချက်လေးတစ်ချို့ကို အရှင်းလင်းဆုံးဖော်ပြကာ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဖွေးဖွေး”
“အစ်ကိုဖြစ်သူ ဒွေးကို ရင်ထဲကနေ လွမ်းဆွတ်သတိရနေမိတယ်ဆိုတဲ့ ဇွဲနိုင်ဝင်း”
“မေမြို့အတက် ခြောက်ထပ်ကွေ့မှာ ရှိတဲ့ မျက်မမြင် ဘုန်းဘုန်းတွေအတွက် ချွေးနှဲစာထဲကမှ လှူဒါန်းခဲ့ရလို့ ပီတိဖြစ်မိတယ်ဆိုတဲ့ ရဲလေးမ”